ကိုယ်ပိုင် website တစ်ခုကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ တစ်ရက်အတွင်း လွှင့်တင်လိုပါသလား? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » ကိုယ်ပိုင် website တစ်ခုကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ တစ်ရက်အတွင်း လွှင့်တင်လိုပါသလား?
Posted by manawphyulay on Aug 2, 2010 in Computers & Technology, Know-How, DIY, Myanma News |7comments
Website အသစ် ကြော်ငြာခြင်း... Websites
အင်ဒမင်ရဲ့စာသားကို ဖတ်မိလိုက်လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါရှင်။ ယူတာ မယူတာ ကာယကံရှင်တွေနဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်။ သိတဲ့သတင်းကို ဖြန့်ဝေတာပါ။
၀ယ်လိုက်မယ် အခုနှစ်ဆယ်လောက် သားသမီးတစ်ယောက်ကိုတစ်ခုစီ၊တစ်နှစ်မှ ဒေါ်လာ100 သိပ်ပေါပါတယ်။
Di lo Myo Tway Shi Lar…
ကျွန်တော်လည်း မန်းတလေး မြို့ ရဲ့သာယာလှပပုံတွေကို website လုပ်ပြီးတင်ချင်နေတာ
ဈေးကကျွန်တော်တို့အတွက် လုပ်နိုင်တဲ့ဈေးဆိုတော့ ကောင်းတယ်ဗျာ